Zvikonzero zvekutora kati yekare | Noti Katsi
Monica sanchez | | Kugamuchirwa, Curiosities
Paunoronga kutora katsi, zvinonetsa kuti usadanana nekiti, kunyanya kana ivo vari vacheche chaizvo. Asi chaizvo nekuda kweizvozvo, nekuda kwekuti vakanaka sei uye vanodakadza, ivo vanowanzo kuve vane rombo rakanaka kana zvasvika pakutsvaga mhuri. Vakwegura vanowedzera kuomarara. Iine nguva shoma yasara yekurarama, vanhu havadi kutora nzvimbo.
Uye kune imwe nhanho zvine musoro: unovada kwazvo zvekuti gare gare zvinonetsa kuti utaure navo. Asi… rega ndikupe zvikonzero zvinoverengeka zvekutora katsi yekare Zvakanaka, ivowo vanokodzera kuwana mukana wekufara.
1 Ivo vatove nehunhu hwakaumbwa
2 Vanotenda zvikuru
3 Ivo havazopaza imba yako
4 Uchavabatsira kukunda kwavo kwekare
Ivo vatove nehunhu hwakaumbwa
Iyo katsi ndeye furry imwe iyo, muchokwadi, munhu anogona kutaura kuti haisati yave nehunhu hwakagadziriswa. Hongu, anogona kunge achiwedzera kana kushoma kutya, zvakanyanya kana kushoma kuziva, asi angangoita ese felines pazera iri diki haana kudzora. Asi, makati akwegura kana akwegura ari ... sezvaari. Iko hakuna kushamisika. Runyararo rwavanarwo rwakakwana, kunyanya kumhuri dziri kutsvaga mudiwa wavanopa rudo rukuru mukati memakore avo ekupedzisira ehupenyu.
Ehe, mhuka yega yega inogamuchirwa inoziva mushe yekutenda mhuri yayo nyowani nechiratidzo, asi ichokwadi kuti kana iri katsi yakura inokuchengetedza iwe kambani uye ikupe rudo rwakawanda zvekuti zvingakushamise iwe… Uye zvakawanda 😉.
Ivo havazopaza imba yako
Kittens vanopandukira uye ndosaka vachida mhuri yakadzikama uye ine mutoro inotamba zvakanyanya navo kuitira kuti vagone kupisa simba rese ravanounganidza. Makati akura, ivo vanowanzo gara, kuitira kuti usazonetseka zvakanyanya nezve imba (asi chenjera, izvi hazvireve kuti haufanire kupa nguva kwavari, asi kungoti ivo kana vasvitsa rimwe zera havasisina chishuwo chakakura kutamba sepaya pavaive imbwanana).
Uchavabatsira kukunda kwavo kwekare
Katsi dzekare dzinowanzosvika panzvimbo yekuvanda mushure mekupedza makore vachigara nemhuri yemunhu iyo, chero chikonzero, yafunga kuisiya. Kune idzi mhuka, kusiiwa idambudziko rakakura zvekuti hazvishamise kuti vasazvikunde. Naizvozvo, kana iwe ukafunga kutora vakuru vakuru, unenge uri kuvapa iwo mukana wekuvaka zvakare hupenyu hwavo, kufara zvakare.
Chii chauri kumirira kutora katsi yekare? 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Zvikonzero zvekutora kati yekare